बसे रही | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
ड्राइभिङ र यातायात
जब तपाईं पहिलो संयुक्त राज्य अमेरिका मा आइपुग्दा, तपाईं बस वा सार्वजनिक यातायात कसरी लिन सिक्न हुनेछ. संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक कार ड्राइभमा, तपाईं एक चालक अनुमतिपत्र र कार बीमा हुनुपर्छ। थप पढ्नुहोस्
आवास र अपार्टमेन्ट
एक घर कसरी पाउन सिक्न. जब तपाईं एक घर भाडामा, तपाईं कागज को टुक्रा हस्ताक्षर र प्रत्येक महिना आफ्नो भाडामा भुक्तानी गर्न सहमत गर्न आवश्यक हुनेछ। थप पढ्नुहोस्
त्यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्टोर को विभिन्न प्रकार हो. केही पसलहरु साँच्चै ठूलो हो र केही साना छन्. तपाईं पनि अनलाइन धेरै कुराहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। थप पढ्नुहोस्
कसरी संयुक्त राज्य अमेरिका मा सुरक्षित हुन सिक्न. आफू र आफ्नो परिवारलाई जोगाउन कसरी सिक्न. अमेरिका मा, प्रहरी तपाईं सुरक्षित रहन मद्दत गर्नेछ। थप पढ्नुहोस्
कम्प्युटर र सामाजिक मिडिया
अमेरिका मा, तपाईं लगभग सबै कुराको लागि कम्प्युटर प्रयोग गर्नेछ. तपाईं कुराकानी गर्न कम्प्युटर वा स्मार्ट फोन प्रयोग गर्नेछ, फेला जब गर्न, अध्ययन गर्न, र भेटघाट गर्न। थप पढ्नुहोस्
प्राचीन लागि एक वरिष्ठ केन्द्र र जानकारी पाउन
तपाईं एक वरिष्ठ आप्रवासी वा शरणार्थी छन्? तपाईं आफ्नो परिवार मा प्राचीन छन्? वरिष्ठ लागि संसाधनहरू बारेमा जान्न. एक वरिष्ठ केन्द्र फेला पार्न र आफ्नो समुदायमा पुरानो सदस्य भेट्न अन्य तरिकाहरू सिक्नुहोस्। थप पढ्नुहोस्
अमेरिका मा मेरो पहिलो महिनाअमेरिका मेरो पहिलो महिना धेरै गाह्रो थियो. म हराएको थिए, भ्रमित, र डराएको. अन्ना, बर्मा बाट शरणार्थी, अमेरिका मा उनको पहिलो महिना बारेमा लेख्छन्।
आफ्नो अधिकार थाहा पाउनुहोस: कानुन प्रवर्तन अन्तरक्रिया कसरीतपाईं प्रहरी afraif छन्? आफ्नो अधिकार थाहा पाउनुहोस! संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक निवासी रूपमा, यहाँ तपाईं एक प्रहरी अधिकारी कुरा गर्दा तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ केही कुराहरू छन्
बनाम घर घर: एक घर र एक घर कस्तो भिन्नता छ?बनाम घर घर: कसैले कठिन काम गर्दछ र पैसा धेरै बनाउन भने, यो एक घर किन्न भनेर कठिन छैन. तर एक घर बस पैसा भन्दा बढी आवश्यक छ।